Y-LR Slurry Pump Parts Factory - China Y-LR Slurry Pump Parts Mpanamboatra, mpamatsy
Fizarana Hydrocyclone Y-CVX
Y-LR faritra misy paompy slurry
AH Slaterry pump impeller
Peratra expeller slurry pump
Volo vita amin'ny paompy slurry
L-Type Slurry Pump impeller
Ny faritra mando vita amin'ny kodiarana dia fanoherana mahery vaika sy fanoherana ny harafesina, matetika ampiasaina amin'ny fepetra miasa asidra. Toy ny fanodinkodinana amin'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany, slurry misy poti kely ary tsy misy sisiny matevina. Ny ampahany amin'ny famindran-toerana dia misy ny Cover Plate Liner, ny lozam-pifamoivoizana, ny lozisialy takelaka, ny sisin-tsoratry ny takelaka vita amin'ny takelaka. Ny fitaovana vita amin'ny fingotra nampiasainay dia manana fanoherana ambony noho ny fitaovana hafa rehetra amin'ny fampiharana slurry sombin-javatra tsara. Ny antioxidants sy ny anti degradents ampiasaina amin'ny fitaovantsika dia ...
Ny valizy vita amin'ny paompy slurry dia faritra mando ao anaty paompy slurry milahatra vita amin'ny rubber izay mitarika ireo slurries mankany amin'ny outlet pump. Ny ankamaroan'ny paompy slurry vita amin'ny kofehy dia mampiasa kofehy vita amin'ny karazam-borona mizarazara, ny iray dia kofehy vita amin'ny takelaka, ary ny iray hafa dia lamba firakotra takelaka, ity rafitra ity dia natao hahamora ny fanoloana azy. Ny paosin-tsolika fantsom-boalobokay dia mazàna vita amin'ny fingotra voajanahary R55 izay manome tolotra fiainana in-1.5 an'ny R26 vita amin'ny kodiarana mahazatra. * L-Type Slurry Pumps impeller Data Model Impeller kaody ...
Adress: ZONE INDUSTRY XIHAOKE, SHENZHOU CITY, HENGSHUI, HEBEI. CHINA
Safidy fitaovana fantsom-bozaka
Ao anaty paompy slurry ny impeller sy ao anatiny ...
Impeller dia rotor, singa miodina o ...
Paoma vita amin'ny lamba famaohana vita amin'ny lamba anoloana
Rehefa mipaoka slurries marokoroko dia tsy ...
* YAAO dia mari-pamantarana voasoratra anarana ary tsy misolo tena na tsy misy ifandraisany amin'ny vondrona Warman of Weir Minerals. Ny anarana, tarehimarika, marika ary famaritana rehetra dia ampiasaina ho an'ny tanjona ihany fa tsy midika izany fa ny paompy na ny faritra voatanisa dia vokatry ny Warman Pumps.